हे भगवान यस्तो पिडा कसैलाई नहोस ! पहिरोले तीन छोरी गु’मा’एकी आमा अहिलेसम्म हो’समा छैनन् – Butwal 24 News
September 23, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on हे भगवान यस्तो पिडा कसैलाई नहोस ! पहिरोले तीन छोरी गु’मा’एकी आमा अहिलेसम्म हो’समा छैनन्
मंगलबार राति तम्घासमा ठूलो पानी पर्‍यो। पानी परेको चा’ल पाएकाहरूको मनले राम्रो सोचेको थिएन। करिब ११ बजेर ४० मिनेट जाँदा रेसुंगा– ८ का तिलक परिवारको घरमा पहिरो ख’स्यो। चार छोरी एकै ठाउँमा म’स्त निदाएका थिए। भित्तापट्टिका जुम्ल्या’हा १४ वर्षीया गंगा र जमुनासहित २१ वर्षीया भावना पहिरोले पु’रि’ए। पहिरोले तीन छोरी गुमाएकी लालमती परियार अहिलेसम्म हो’समा छैनन्। रातिदेखि नै विक र परियार दुवै परिवार छिमेकी खेतबहादुर भलामीकोमा आश्रय लिएका छन्।
भलामीको पिँढीमा वि”क्षि”प्त लालमतीले जुम्ल्याहा छोरी गंगा, जमुना र भावना सम्झेर छा’ती पि’टि’रहेकी छिन्। जेठी छोरी सुष्मा र आफन्तले लालमतीको चित्त बुझाउन खोज्दै थिए। तीन सन्तान एकै ठाउँ गु’मा’एकी आमासँग मन बुझाउन कुनै उपाय थिएन । ढोकाछेउमा सुतेकी साँहिली छोरी सुजतालाई बुबाले ता’नेर ब’चा’ए। पहिरो खसेको छिमेकी ईश्वर विकको परिवारले पनि चा’ल पाए। दुवै परिवार निकैबेर चि”च्या’ए’र गु”हा”र मागे। घाँ’टी सु’क्यो। तर, पानी निकै ठूलो परेकाले कसैले सुनेनन्।
ईश्वरले प्रहरीको १०० नम्बरमा दुईपटक फोन गरे। तर, उठेन। उनी उद्धारको कुनै उपाय नभएपछि अ”र्ध’चे”त अवस्थामा प्रहरी कार्यालय पुगे। ‘चि”च्या’उँदा घाँ’टी बस्यो प्रहरीले फोन उठाएन। सुरुमा मान्छे पु”रि’एकै विश्वास लागेन। तर, केही पहिरो फालेपछि भावनालाई मृ”त अवस्थामा बाहिर निकाल्यौँ,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘पछि सेना पनि आयो, जुम्ल्याहा दिदीबहिनी पनि मृ”त भेटिए।’ करिब चार घन्टामा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले पहिरोमा पु’रिए’काहरूलाई बाहिर निकाल्यो।
‘बुबाका अनुसार एउटी छोरीले बाबाबाबा पनि भनेकी थिइन् रे परिवारले निकाल्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘एउटै परिवारमा निकै दुःखदायी अवस्था देख्यौँ। रातमा दौ’डि’एर प्रहरी कार्यालय पुगेँ,’ उनले भने, ‘कार्यालय पुगेर पनि बो’ल्न सकिनँ पानी खाएपछि मात्रै केहीबेरमा बोलेँ। करिब साढे १२ बजे सुरुमा प्रहरीको गस्ती टोली घ’ट’नास्थल पुग्यो।
उ’द्धारको सम्भावना भएन। केहीबेरमै प्रहरी प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराईसहितको टोली उ’द्धारमा पुग्याे। साँ’घुरो कोठा र पानी परिरहेकाले फेरि पनि सहज उद्धार सम्भव थिएन। तर, टोलीले पहिरो फा’ल्न थाल्यो। पहिरोले भान्सा घर फु’टेका छिमेकी ईश्वर विकको परिवारले पनि घर छोडेका छन्। आँगन जोडिएको अर्को घरमा तीनजनाले ज्या”न गु’माए।